OnePlus dia manamafy ny kalandrie fanavaozana ny Android 10 | Androidsis
Eder Ferreno | | Finday, OnePlus
Tonga ny OnePlus iray amin'ireo marika malaza indrindra eo amin'ny sehatry ny fanavaozana. Ny iray amin'ireo tombony dia kely ny katalaogin-telefaon'izy ireo, izay manome azy ireo ny fahaizana manavao ny telefaonany haingana. Ny orinasa dia efa miasa amin'ny fitondrana ny fanavaozana ny Android 10 amin'ny findainy. Ankehitriny dia avelany miaraka amin'ny kalandrie ofisialiny isika.
Ny orinasa dia efa mampiasa Android 10 ho an'ny telefaona sasany, toy ny OnePlus 7 sy 7 Pro. Navelan'izy ireo taminay ireo daty ahafahantsika manantena fa ny ambiny amin'ireo maodely ao amin'ny katalaoginy dia hanana izany. Ka efa fantatry ny mpampiasa hoe rahoviana no antenaina izany.
Ny tale jeneralin'ny orinasa dia efa nanamafy ny datin'ny fanavaozana ny Android 10 ho an'ny findainy. Noho izany, ireo mpampiasa rehetra izay manana ny maodelin'ny marika sinoa, dia efa mahalala ny fotoana ahafahany manantena ny handray azy io amin'ny finday avo lenta. Ireto misy daty:
OnePlus 7 sy 7 Pro: Efa naparitaka androany ny fanavaozana manerantany
OnePlus 6 sy 6T: Ny beta ho an'ny daholobe dia havoaka amin'ny faran'ny volana oktobra sy ny kinova miorina amin'ny faran'ny volana novambra
OnePlus 5 sy 5T: Ny fanavaozana dia havoaka amin'ny telovolana faharoa (eo anelanelan'ny aprily sy jona) amin'ny 2020
Izany dia efa mazava tsara amintsika momba an'ity raharaha ity, ho an'ireo mpampiasa izay manana ny maodelin'ilay mpanamboatra. Ny iray amin'ireo vaovao tsara dia ho an'ireo izay manana OnePlus 5 sy 5T. Araka ny ireo finday ireo dia handray Android 10 amin'ny fomba ofisialy, na dia efa tsy ao anatin'ny tsingerin'ny fanavaozana aza izy ireo. Saingy hisy fanavaozana toy izany na ahoana na ahoana.
Noho izany dia miandry fotsiny izao ny Ny finday orinasa dia efa manana fidirana amin'ny Android 10. Ny voalohany dia efa mandeha, raha ny maodely tamin'ny herintaona kosa dia tsy maintsy hiandry iray volana mahery kely vao hiditra amin'ny farany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » OnePlus dia manamafy ny fandaharam-potoana fanavaozana azy amin'ny Android 10
Voamarina: Ho tonga amin'ny volana oktobra ny Huawei Mate X